News - nsw-api-600-albaab-waalka-xirxirida
Badbaadinta iyo bedelka API 600 Gate Valve xirxiraan
Habka keydinta ee xirxirida waalka:
Fiilooyinka mashruucan inta badan waxay ka kooban yihiin labada shay ee soo socda: PTFE iyo garaafka jilicsan.
Markaad keydiso, ku xir bac ama sanduuq. Si fiican ugu keydi bakhaar qalalan oo hawo leh, iska ilaali iftiinka qoraxda. Fiiro gaar ah u yeelo hawo inta lagu jiro keydinta muddada-dheer, oo xakamee heerkulka barta keydinta oo aan ka badnayn 50 ° C si looga hortago boodhka xad-dhaafka ah. Haddii siigada ku dhegsan dusha miiraha dusha laga saaro oo la isticmaalo, ku masax maro nadiif ah.
Habka beddelidda xirmada waalka:
Xirmooyinka xirmooyinka waxaa loo sameeyaa sida soo socota: 1). Xirxirida lowska xoqida, 2) balka suunka, 3) biin go'an, 4) xirxirida, 5) xirxirida xirxirashada, 6) xirxirida saxanka cadaadiska (mararka qaar 5 iyo 6 waa qaybo muhiim ah iyadoo loo eegayo caaryada oo lagu go'aamiyay xaalado shaqo oo kaladuwan, shaqada guud wuxuu la mid yahay kan kala qeybsan)
Tallaabooyinka beddelka xirmada xirmooyinka waa sida soo socota:
1. Isticmaal firiji si aad uga saarto 1) lowska isku-buufinta wax lagu duubo oo kor u qaad 5) shaadhka xirxirashada xirxirashada iyo 6) saxanka saxafadda wax lagu duubo, oo u baneynaya meel loogu talagalay hawlgalka beddelidda xirxirida.
2. Isticmaal baaruud fidsan ama bir kale oo bir ah si aad uga saarto xirmada asalka ah uguna beddel mid cusub. Haddii xirxirida xirxiraha la isticmaalay, markaad rakibineyso xirxirida cusub, fiiro gaar ah u yeelo jihada gooynta xirmooyinka inay jajabiso 90 ~ 180 °, xagasha kujirtana lagu celiyo labo labo. Ha ku laaban iskudhaf isku dhinac ah sida ku cad shaxanka;
3. Ka dib markaad rakibato qadar ku habboon xirxirida, dib u soo celi 5) qanjirka xirxiraya iyo 6) xirxirida saxanka cadaadiska. Markaad rakibayso, fiiro gaar ah u yeelo booska shaabadaynta iyo 6 ~ 10mm qoto dheer oo daboolka waalka (ama 1.5 ~ 2 jeer dhumucda baakadka) sida tixraaca meelaynta (Sida hoos ka muuqata).
4. Soo celi 1). Xirxirida lowska isku-buufinta, 2) Adkee booska rakibidda ee bool wadajirka ah illaa ay ka gaarto 20% isugeynta baakadka.
5. Markaad dhamayso talaabooyinka kor ku xusan, ku samee baadhitaano muhiim ah wiishka beddelay xirxirida adeegsiga soo socda si aad u ogaato haddii ay lagama maarmaan tahay in la kordhiyo preload ee xirxirida.
Faallooyin: Tilmaamaha dib-u-adkeynta iyo beddelidda xirmooyinka cadaadiska.
Hawlgallada soo socdaa waa hawlgallo khatar ah. Fadlan si fudud ha isku dayin haddii aysan muhiim ahayn. Fadlan si adag u raac dukumintigan hagida inta lagu jiro talaabooyinka hawlgalka:
1. Hawl wadeenku waa inuu lahaadaa faham gaar ah mashiinada iyo filtarka. Marka lagu daro qalabka farsamada loo baahan yahay, hawlwadeenku waa inuu xiraa galoofisyo kululeynaya kuleylka, gaashaammada wejiga, iyo koofiyadaha.
2. Waalka ayaa si buuxda loo furay illaa shaabadda sare ee waalka uu si buuxda waxtar u leeyahay. Saldhigga xukunku waa in farsamaynta qalabku uusan mar dambe qaadi karin jirida wiishka, mana jiro dhawaaq aan caadi ahayn oo ka soo baxa wiishka waalka.
3. Hawl wadeenku waa inuu ku sugnaadaa dhinaca booska shaabadaynta ama boosas kale oo aan la saadaalin karin. Waa mamnuuc in la wajaho booska wax lagu duubo. Markay xirxiridu u baahan tahay in la adkeeyo, isticmaal bambaano si aad u adkeyso 1) Baakidhida isku xoqida, 2 ~ 4 ilig, labada dhinac ee lowska riixaya xirxirida Waxay u baahan tahay in la fuliyo, ma ahan oo kaliya hal dhinac.
4. Marka xirxirida loo baahan yahay in la badalo, isticmaal firiir si aad u kala furto 1) Lowska isku-buufinta xirxirida, 2 ~ 4 ilig, lowska isku-buufinta xirmooyinka ee labada dhinacba waxaa loo baahan yahay in si is daba joog ah loo fuliyo. Inta lagu jiro muddadan, haddii ay jirto jawaab aan caadi ahayn oo ka timaadda wiishka, isla markiiba jooji oo dib u cusbooneysii lowska, sii wad Ku shaqeynta farsamaynta qalabka shaqeynaya iyadoo la raacayo habraaca tallaabada 2aad, buuxi shaabadda dusha sare ee waalka illaa ay si buuxda waxtar u leedahay oo sii wad beddelida xirxirida. Xidhmada beddelka ee cadaadiska looma oggola in gebi ahaanba la beddelo marka laga reebo xaalado gaar ah mooyee. Tirada bedelka waa 1/3 wadarta xirmooyinka. Haddii aysan suurtagal ahayn in la xukumo, saddexda xirmooyin ee ugu sarreeya waa la beddeli karaa. Ka dib marka rakibidu dhammaato, soo celi rakibidda 5 xirmada xirmada ee saxaafadda iyo 6 saxanka saxanka xirxiranaya. Markaad rakibayso, fiiro gaar ah u yeelo booska shaabadaynta oo 6 ~ 10mm qoto dheer u gal daboolka waalka (ama 1.5 ~ 2 jeer dhumucda xirxirida) sida tixraaca meelaynta. Soo celi 1). Xirmada lowska isku-buufinta, 2) Adkee booska rakibidda ee isku-xidhka wadajirka ah ilaa 25% ee isku-xojinta ugu badan ee xirxirida. Haddii aysan jirin wax daadasho ah oo ku jira xirxirida wiishka hoose ee waalka, way dhammaystiran tahay. Haddii uu daadanayo, raac habraacyada tillaabooyinka 2 iyo 3 si aad u adkeyso.
5. Dhammaan tillaabooyinka hawlgalka ee kor ku xusan waxaa loogu talagalay oo keliya wiishka wiishka ee wiishka kor u kaca sida: kor u kaca wiishka xididka, kor u kaca wiishka istaagga, iwm., Laguma dabaqi karo jirridda jirridda madow iyo kuwa aan kor u qaadin sida: waalka joojinta waalka, waalka balanbaalis, filtarka Balliga iyo wixii la mid ah.